Sandals Resorts Inopemberera Rinokosha Rinokosha neNew Caribbean Investment
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Sandals Resorts Inopemberera Rinokosha Rinokosha neNew Caribbean Investment
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • dzidzo • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Sandals Resorts International (SRI) yakazivisa makumi mana emakore echiratidzo chayo chevaenzi-chete, Sandals Resorts. Kubva kuvhura kwayo mikova muMontego Bay musi waNovember 40, 27, Sandals Resorts yakafadza vashanyi, yakabatana nevarairidzi vekufamba, uye ikabatsira kuvaka kushanya muCaribbean, uko kwakazvipira mukukudziridza kugona kwevaenzi munzvimbo yese, imwe yevanodiwa zvikuru uye nzvimbo dzakashinga dzekushanya munyika.
Iyo yakasarudzika resort kambani iri kupemberera makore makumi mana ezvese-zvinosanganisira mutsa.
Iri kurangarira nhaka yemuvambi wayo mushakabvu Gordon "Butch" Stewart "uye nekuisa hwaro hweramangwana.
Sandals Resorts yakazivisa chitsva cheSchool Of Hospitality, makumi mana emakungwa enharaunda yeCaribbean yekushanya, nzvimbo dzakatenderedzwa, uye nezvimwe.
Iyo yakasarudzika yese-inosanganisira resort kambani iri kupemberera Sandals 'chiitiko chakakosha nekukudza nhaka yemuvambi wayo, mushakabvu Gordon' Butch 'Stewart, achivhenekera mwenje pamhedzisiro yekushanya munharaunda dzeCaribbean, kudzosera wachi kumashure nekunakidzwa kwekufunga. kuyambuka ese maSandals ese-anosanganisira maresitoreti, uye ichaenderera nekumwe kushamisika kuzoburitswa mugore rese.
"Gore rino rinoratidza chiitiko chinoshamisa cheSandals Resorts, uye zvinonyanya kukosha sezvatinotora nguva ino kukudza izvo zvakagadzirwa nababa vangu nekuenderera mberi nenhaka yavo inokudzwa kuCaribbean," akadaro Sachigaro weSRI Executive, Adam Stewart. “Kubva pakavhurwa mureza muna 1981 pa Shangu Montego Bay, takaenderera mberi nekusimudza uye tungamira iyo yese-inosanganisira nzvimbo yekutandarira. Kupfuura izvo, isu takaratidza kuti imwe yeindasitiri inonakidza uye inogara kwenguva refu yekugamuchira vaeni zvigadzirwa zvakagadzirwa muCaribbean. Ini ndinodada kupemberera ichi chinhanho chekambani yedu padivi pemhuri yedu yeSandals sezvatinotarisa kumakore anotevera makumi mana e yakafemerwa Caribbean kuona uye hunyanzvi. "
Mukuremekedza gore rayo makumi mana, Sandals Resorts inodada kuzivisa:
Gordon "Butch" Stewart International Chikoro Chekugamuchira Vaeni neKushanya
Mukuremekedza muvambi weSandals mushakabvu Gordon “Butch” Stewart nemweya wake webhizimusi ane mukurumbira uye kutenda kweupenyu hwese musimba redzidzo, Sandals Resorts International inozivisa kuvakwa kweGordon “Butch” Stewart International School Yekugamuchira Vaeni neKushanya kuUniversity of the West Indies (Iyo UWI) uye pamwe chete neFlorida International University's (FIU) Chaplin Chikoro Chekugamuchira Vaeni neKushanya Management. Vatungamiriri vese vari vaviri mune zvedzidzo yekushanyirwa, FIU yakabatana neiyo UWI, ichavandudza chizvarwa chinotevera chekushanyirwa kwepasi rose uye hutungamiriri hwevaenzi, kuburikidza neakagamuchirwa zvizere undergraduate uye kudzidza chirongwa. Chikoro chitsva ichi chichave kuWestern Campus yeYunivhesiti yeWest Indies, Mona muguta reCaribbean rekushanya kweMontego Bay.
Nzvimbo yekucheka, yekutsvagisa-inotungamirwa, iyo Gordon "Butch" Stewart International Chikoro cheKugamuchira Vaeni uye Tourism ichapa vadzidzi mikana inodzidzisa ine chinangwa kupfuura yekirasi. "Baba vangu vaitenda mukudzidza neruzivo - 'pa-basa rekudzidzira,' sezvavaigara vachitaura," akadaro Stewart. “Seye muzvinabhizimusi anopedzisa uye muroti kweupenyu hwese, aiziva kuti kubudirira kwakazvarwa kuseri kwebhodhihodhi; yakawanikwa panzvimbo yenguva dzekutsvaga uye kuwanikwa. "Iyi idhiraivhu inokurudzira dzidzo yepasi rose, ichiisa vadzidzi mune zvakaitika chaizvo pasi sechikamu chebudiriro yavo."
Kuisa mari mune dzidzo kwagara kuri kukosha kweSRI, uye chikoro chitsva ichi chinozadza Sandals Corporate University, iyo yakagadzwa kupa nhengo dzechikwata cheSandals dzeCaribbean mikana yekuvandudza nekuvandudza hunyanzvi hwekuita basa uye kuwana dhigirii repashure uye apedza kudzidza. "Patinoisa mari muCaribbean vanhu, tinoisa mari mune ramangwana renharaunda," akadaro Stewart.
40 ye40 Initiative: Mapurojekiti Anobatsira Caribbean Nharaunda
Kunyangwe isiri iyo nguva apo Sandals yakavambwa makumi mana emakore apfuura, mweya wehukama hwemagariro mutoro (CSR) wanga uri chikamu chejira rekambani kubva pakuvambwa kwayo. "Kubatana pakati pekushanya pamwe nekugara zvakanaka kwenzvimbo dzatinoshandira dzeCaribbean hazvirambiki," akadaro Adam Stewart. Mukukudzwa kwekambani makumi manath gore, Sandals Resorts International, pamwe ne Sandals Foundation, iro risiri-rekuita purofiti rakatangwa muna2009 kubatsira SRI kuita mutsauko muhupenyu hwevanhu veCaribbean, iri kuratidza mapurojekiti makumi mana anonyatsoratidza kubatana kunoshamisa pakati pekushanya - indasitiri ine simba kwazvo munharaunda - nesimba rayo rekushandura nharaunda dzeCaribbean uye kugadzirisa hupenyu.
Mapurojekiti achasarudzwa munzvimbo shanu dzakakosha: kutsigira varimi vemuno, kudzidziswa kwekugamuchira vaeni & chitupa, kuchengetedza zviwanikwa, kushandisa rakasarudzika mhizha nekushambadzira munharaunda. Kubva pakuedza kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza panzvimbo yeUNESCO World Heritage saiti muJamaica's Blue naJohn Crow Mountains uye nekuvandudza kugona kwevarimi kuti vawedzere kushanda kwavo mukugadzira chikafu chinogara chiripo, kushanda pamwe nevanoona zvemuno kuti vawedzere matarenda avo, nhengo dzeboka reSandals dzichange dzichikunguruka. kusimudza maoko avo kuti vaunze mapurojekiti aya kuhupenyu uye vari kukoka vaenzi kuti vapindewo.
Nguva dzose paChitsuwa Nguva - Kuzivisa maSandals PalmCast
Sandals Resorts iri kubvisa hurukuro nekuchengetedza maCaribbean kumberi nepodcast yayo yekutanga, "Sandals PalmCast," ichipa vateereri mukatikati mezviitiko pazvese zvinoitika kumahotera ane zvikamu gumi nezvisere kusvika makumi maviri zvemaminetsi. ruzivo rwehunyanzvi, kutarisa pamusoro, uye kubvunzurudzwa kwakasarudzika nekushamisika munzira. Iine avhareji yekudzokorora muyero wevaeni uri pedyo ne13%, vashanyi veSandals vakatendeka zvakanyanya uye vanoshuvira kudzidza nezvezvinoitika kuitika panzvimbo yekutandarira uye muCaribbean yese kubva kuSandals Resorts, mumiriri anokosheswa weCaribbean brand.
Pane-chivakwa, vashanyi vanogona kujoina kupemberera kune ese maSandals Resorts nekugutsurira kufungidzira kusanganisira:
Kubva kuOG kuenda kune Zvinoshamisa - Zvino & Zvino Tsika Cocktails & Nyowani Poolside Sevhisi
Sevagadziri vebhawa rekushambira, Sandals inoziva chinhu kana zviviri nezve kudurura yakanakisa poolside cocktaileja. Iyo mhando iri kupemberera nekugadzira zvimwe zvitsva zvido uye nekudzosa zvimwe zvekutanga. Vashanyi vanogona kutora sip yekumusoro ndangariro nzira pavanenge vachishandisa parutivi-ne-padivi 1981/2021 cocktail menyu kuchinjika pakati pezvakanaka pasina kushandisa nguva muchina kusvika ipapo. Ese maSandals Resorts anotangisawo nyowani poolside sevhisi ichishandira kumusoro kweCaribbean-yakafemerwa snack & cocktail menyu kuitira kuti vashanyi vagone kuzorora padziva kwenguva refu. Pamusoro pezvo, mabhawa uye maresitorendi mukati mechiratidzo anozotanga chiitiko chitsva chakagadzirwa nemaoko chinosanganisira makombamire masere matsva akakwenenzverwa achishandisa musanganiswa wakasarudzika wemidziyo, doro rekutanga, zvigadzirwa zvitsva, uye mishonga yakasarudzwa nemaoko kubva kumapurazi emuno.
Shangu Dzosera Zviitiko
Vashangu vashanyi vanogona kupemberera kunge gore ra1981 nemhemberero dzevhiki nevhiki poolside yekuyeuka makore makumi mana emufaro. Vaenzi vanogona kunyudza zuva nepo zvakapfuura zvichisangana neramangwana rakaunzwa nehupenyu maDJ arikutenderera mimhanzi yakafemerwa uye bartenders vanoshandira epamberi michina yekupfeka.
Vintage Retail Unganidzo mu Beach House Resort Shops
Sandals Resorts iri kuvhura EST. 1981-yakafemerwa vintage t-shati uye yekutengesa muunganidzwa inowanikwa mune ese Beach House nzvimbo dzekutengesa. Vaenzi vanogona kusarudza kubva gumi gumi nostalgic uye akasimba magadzirirwo ayo anoremekedza kune Sandals 'yekutanga nguva yemaitiro, anowanikwa kutenga kutanga munaNovember.
Pamusoro pehurongwa hwepa-pfuma, rombo rakanaka reSandals Sarudza Mibairo uye kwenguva yakareba Certified Sandals Nyanzvi yekufambisa vafambidzani vanobatirwawo kune vanodzoka kudya kwemanheru uye vanogonawo kukokwa kujoina 40th Anniversary yekuyeuchidza seiri muThe Lady Sandals, Sandals Resorts 'siginecha yacht iri parwendo rwekupemberera kufamba nechikepe pamwe nemaEastern seaboard gore rese.
Kuti udzidze zvakawanda nezvekuti maSandals Resorts ari kupemberera sei ayo 40th Anniversary uye kuti ugare uchikwanisa kuziva zvimwe zvinoshamisira zvinouya, ita chokwadi chekushanyira pano.
Kugadzirira kugara kuSandals Resorts, shanyira pano.
Sandals® Resorts inopa vanhu vaviri vari murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisirwa® zororo ruzivo muCaribbean kune ayo 15 anoshamisa emahombekombe marongero muJamaica, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada, uye nyowani 16th nzvimbo inouya kuCuracao Kubvumbi 2022. .Kupemberera makore makumi mana, inotungamira yese-inosanganisirwa nzvimbo yekambani inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero epasi. Sandals Resorts yakasarudzika inosanganisira siginicha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; iyo Red Lane Spa®; 40-Nyeredzi Global Gourmet ™ yekudyira, kuve nechokwadi chepamusoro-pasherufu doro, premium waini, uye gourmet yakasarudzika maresitorendi; Aqua Nzvimbo nehunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; nekukurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Customizable Michato. Sandals Resorts inovimbisa vaenzi runyararo rwepfungwa kubva pakusvika kusvika pakuenda ne Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana, matanho akasimudzirwa nekambani ehutano nekuchengeteka akagadzirirwa kupa vashanyi chivimbo chikuru pavanenge vachienda kuzororo muCaribbean pamwe neSandals Vacation Assurance nyowani, chirongwa chakazara chekudzivirira zororo chine indasitiri-yekutanga vimbiso yemahara kutsiva zororo kusanganisira nendege yevaenzi yakakanganiswa. ne COVID-19 inoenderana nekukanganisa kwekufamba. Sandals Resorts chikamu chemhuri dzinowanikwa neSandals Resorts International (SRI), yakavambwa nemuchakabvu Gordon "Butch" Stewart, iyo inosanganisira yemhuri-inotungamirwa Beaches Resorts. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Sandals Resorts Luxury Inosanganisirwa® mutsauko, shanyira sandals.com.